मनोज पुनले यसरी गराए दुर्गा तिवारीको हत्या तीन अपराध तर, कनेक्सन एक – Setosurya
मनोज पुनले यसरी गराए दुर्गा तिवारीको हत्या तीन अपराध तर, कनेक्सन एक
भैरहवा । युवा संघ रुपन्देहीका तत्कालीन अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको हत्यामा संलग्न भएको अभियोगमा पक्राउ परेका ८ जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ । मुख्य अभियुक्त र सुटरसहित ५ जना अझै फरार छन् ।
झण्डै सोढे २ महिनाको अनुसन्धानपछि प्रहरीले तिवारीको हत्याको मुख्य योजनाकार मनोज पुन नै भएको बताएको छ । घटना भएकै दिन पुस ४ मा उनले टेलफोनमा तिवारी हत्याको जिम्मेवारी लिएका थिए ।
तिवारीको हत्या रिसिबीको कारण नै भएको पनि प्रहरीको निश्र्कष छ । तर, मनोज फरार भएकामले के कारणको रिसिबी भन्ने प्रहरीले खुलाउन सकेको छैन ।
यद्यपि मनोज पुन विगतमा एमालेकै कार्यकर्ता रहेको र तिवारीकै कारण पार्टीले कारवाही गरेको भन्ने बुझाइका कारण पुनले तिवारीसँग रिसिबी राखेको देखिन्छ ।
घटनामा १३ जना संग्लनता रहेको प्रहरीले बताएको छ । त्यस मध्ये घटनामा संग्लन रहेको ८ जना पक्राउ परेपनि मनोज पुन सहित ५ जना अझै फरार रहेका छन् ।
पक्राउ पर्नेहरुमा देवदह नपा ६ का ३१ वर्षीय बसन्त बहादुर चापागाई, तिलोत्तमा नपा १५ का २७ वर्षीय बुद्धिसागर यादव, सोही स्थानका २४ वर्षीय राजेश यादव, तिलोत्तमा नपा ८ का प्रयास भन्ने खेमानन्द भट्टराई, २३ वर्षीय सागर थापा, धकधई ८ का २८ वर्षीय अंगद थारु, देवदह नपा १ का २८ वर्षीय ऋषिश्रवर कुमाल र पुनको भान्जा रोजन गुरुङ्ग छन् ।
घटनामा मुख्य योजनाकार भने देवदह नपा ६ का २९ वर्षीय मनोज पुनहुन् । सिद्धार्थनगर नगरपालिका (भैरहवा) १३ का विकास भन्ने सोम बहादुर आले योजनाकार भएको प्रहरीले बताएको छ । राजु नामक सुटर घटनामा प्रयोग भएको छ । उनीसँगै बारा गढीमाई नपा १ श्याम गुरुङ्ग पनि फरार छन् ।
यसरी हानियो तिवारीमाथि गोली
यो घटना गराउन मुख्य योजनाकार मनोज पुन आफैंले योजना बुनेको र एक अर्कासँग परिचय नभएको व्यक्तिहरुलाई घटनामा संग्लनता गराइएको देखिन्छ । पक्राउ परेको अधिकांश आरोपीहरु अपराधी पृष्ठभुमिको रहेको प्रहरीले बताएको छ ।
घटनाको लागि आवश्यक पर्ने मोटरसाइकल पुनको निर्देशनमा पक्राउ परेको सागर थापाले चोरीको बा ५१ प ८०७३ -नक्कली नम्बर प्लेट) किनेका थिए । र, घटनाको केही महिना अघि नै बुद्धिसागर यादवलाई लुकाएर राख्न लगाएका थिए ।
सागर थापा र बद्धिसागरको एक आपसमा चिनजान थिएन । पुनले सागरलाई दिएको निर्देशन अनुसार सागरले मोटरसाइकल यादवलाई लगेर दिएका थिए । हतियार भने बाबु भन्ने तुल बहादुर सिजाँलीले व्यवस्था गरे ।
घटनाको सम्पुर्ण तयारी पश्चात पुस ४ गते दिन बुद्धिसागरको घरमा रहेको चोरीको मोटरसाइकल बुद्धिसागरले आफ्नो भाइ राजेश यादव मार्फत देवदह मणिग्राम सडकखण्डको रोहिणी खोलासम्म पुर्‍याउन लगाए । उता उक्त मोटरसाइकल लिनका लागि ३ जना आए । पक्राउ परेको खिमानन्द भट्टराईले आफ्नो लु २८ प २११९ नम्बर मोटरसाइकलमा सुटर राजु र मोटरसाइकल चालक सागर थापाले बसालेर रोहिणी खोलमा उक्त मोटरसाइल लिन आए ।
मोटरसाइकल पुर्याउन गएर राजेश यादव र मोटरसाइकल लिन आएका ३ जना बिच परिचय थिएन । त्यसपछि उक्त मोटरसाइकल सागर थापाले चलाए र सुटर राजु पछाडी बसे ।
त्यसपछि सागर र राजुले तुलबहादुर सिजालीसगँ हतियार लिए । उता पक्राउ परेका देवदह नपा ६ का ३१ वषर्ीय बसन्त बहादुर चापागाईले पुनको निर्देशनमा दिनभरी तिवारीको गतिविधीको निगरागी गरी जानकारी गराइरहेका थिए ।
चापागाईको सूचना अनुसार राजु र सागर देवदहको खैरनीमा आएर पौडेल मिष्ठान भण्डार आगाडि रहेका तिवारीमाथि निगरानी राखेर पिछा गर्दौ गए र, तिवारी स्थानीय खुशी न्यौपानेले चलाएको मोटरसाइकलको पछाडि बसेर देवदह ८ स्थित कोलिया मार्गमा गइरहेको अवस्थामा सुटर राजुले गोली प्रहार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र धानुकले बताए ।
प्रहरीका अनुसार उनीहरु तिवारीमाथि गोली प्रहार गरेर सेमराना हुँदै मोटरसाइकल लिएकै ठाउँ रोहिणी पुलमा पुगे । र, उनीहरुले घटनामा प्रयोग उक्त मोटरसाइकल त्यहाँ छाडे । त्यसपछि बिचमा सागर र राजु दुवैले पुनलाई टेलिफोन सम्पर्क गरी घटना सफल भएको जानकारी गराएका थिए । पुनलाई टेलिफोन गरेलगतै सागरले प्रयोग मोबाइल र सिम भाचेर फालिदिए ।
त्यहाँबाट खिमानन्द भट्टराईले उनीहरुलाई पुन आफ्नो मोटरसाइकलमा बसालेर मणिग्रामसम्म पुर्याएको अनुसन्धान पाइएको छ । त्यसपछि भट्टराईले मणिग्रामबाट सुटर राजुलाई पोखरा र सागरलाई पाल्पा हुँदै गुल्मी रिडीतर्फ पठाएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको एसपी धानुकले बताए ।
घटनापछि पुनले उद्योगी, व्यवसायीलाई धम्काउँदै रकम असुली कार्य सुरु गरे । पुनले रकम असुलीको लागि धकधई ८ का २८ वषर्ीय अगंद थारु र देवदह नपा ९ का २८ वषर्ीय ऋषिश्रवर कुमाललाई खटाए, जो अहिले पक्राउ परेका छन् ।
दुवैजनाले बुटवलको मणिमुकन्द सेन पार्कबाट एक उद्योगीसँग एक लाख रुपैयाँ लिएर ८९ हजार रुपैयाँ सोनु राप्चाको नाममा काठमाडौं पठाए । र, ११ हजार रुपैयाँ आफैंले खर्च गरे ।सोनु राप्चाको नाममा आएको उक्त ८९ हजार रोजन गुरुङ्गले काठमाण्डौंबाट उत्तम बस्यालको नाममा दुबईमा पठाए । रोजन गुरुङ्ग र सोनु राप्चा श्रीमान श्रीमती हुन् । रोजन गुरुङ्ग पुनको भान्जा हुन् ।
घटना घटाएर गुल्मी गएको सागर थापा केही समयपछि काठमाडौं पुगेका थिए र रोजनले कोठाको व्यवस्था मिलाइदिएका थिए ।
घटनामा कुन भूमिकामा संग्नलता रहेको भन्ने पुष्टि नभएपनि फरार रहेका भैरहवाका विकास भन्ने सोमबहादुर आले, बारा जिल्लाका श्याम गुरुङ्ग र मनोज पुन अहिले पनि सँगै बसिरहेको अनुसन्धानमा पाइएको प्रहरी स्रोतले बताएको छ ।
तीन अपराध तर, कनेक्सन एक
केही महिनाको अन्तरालमा रुपन्देहीमा तीन घटना भए । र, सबैको एउटै कनेक्सन देखिएको छ ।
गत भदौ १२ गते भैरहवामा पेस्तोल देखाएको ७ लाख ६० हजार रुपैयाँ लुटपाट, मंसिर २१ गते सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपाने माथि गोली प्रहार र पुस ४ गते युवा संघ नेपाल रुपन्देहीका अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको गोली हानी हत्या गरिएको थियो ।
भदौ १२ गते सिद्धार्थनगर पालिका ३ दरखसवा (भैरहवा) मा अरुणकुमार तेली र कमलेश यादवको साथमा रहेको ७ लाख ६० हजार रुपैयाँ लुटिएको थियो । उक्त घटनामा ८ जनाको संग्लनता रहेको प्रहरीले बताएको छ । त्यसमध्ये ५ जना पक्राउ परेको र ३ जना फरार रहेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा घटनाको लागि मोटरसाइकल तथा कटुवा पेस्तोल उपलब्ध गराउने रुपन्देही हाटीबनगाई ६ का २९ वर्षीय पवनराज भर, घटनामा प्रयोग भएको हतियार राख्ने सोही स्थानका ५०वर्षीय अनरुद्र यादव, सूचना उपलब्ध गराउने भारत महराजगंज जिल्ला सुनौलीका ३० वर्षीय अरबिन्द साहनी, बाटो रेक्की गर्ने रुपन्देही कम्हरीया ४ का ४२ वर्षीय मोचु भन्ने ओमप्रकाश मल्लाह, र घटनाको दिन मोटरसाइकल उपलब्ध गराउने ३३ वर्षीय सक्रौन पकडी ९ का श्रीनिवास यादव छन् ।
त्यस्तै फरार हुनेहरुमा घटनाको मुख्य योजनाकार तथा घटनास्थलमा पेस्तोल देखाई रकम लुटपाट गर्ने सिद्धार्थनगर नगरपालिका (भैरहवा) १३ का ४२ वर्षीय विकास भन्ने सोमबहादुर आले, घटनामा मोटरसाइकल चालक सिद्धार्थनगर नगरपालिका (भैरहवा) ४ दोगहाराका २४ वषर्ीय मनौर मुसलमान, हतियार उपलब्ध गराउनेमा सक्रौन पकडीका ३५ वर्षीय शिवशंकर चौधरी छन् ।
पुन कहाँ आलेको सेल्टर
प्रहरीले रकम लुटपाट घटनामा अनुसन्धान गर्दै जाँदा घटनाको मुख्य योजनाकार सोमबहादुर आले रहेको प्रहरीले निश्र्कष निकालेको छ । जो अहिले मनोज पुनसँगै बसिरहेका छन् । आले अपराधी पृष्ठिभूमिका व्यक्ति हुन् ।
उनी भैरहवा कारगारमो जेल सजाय काटिरहेको बेला उनको मनोज पुनको निकटतम व्यक्तिमार्फत कारगारमै भेटघाट भएको थियो । र, त्यही भेटघाटले अहिले आले पुनसँगै पुगेका छन् । आलेले भैरहवामा रकम लुटपाट गरेपछि उनलाई पुनले सेल्टेर दिएको देखिन्छ ।
र, दुवैले मिलेर उद्योगी व्यवसायीसँग रकम असुली गरिरहेको प्रहरीले अनुसन्धानमा पाएको छ ।
गत मंसिर २१ गते सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघको उपाध्यक्ष कुल प्रसाद न्यौपाने गल्लामण्डीस्थित आफ्नै निवासमा बसिरहेको अवस्थामा गोली प्रहार गरिएको थियो ।
तर, गोली उनलाई लागेन । घटनाको नुसन्धान गर्दै जादाँ रकम लुटपाट घटनामा संग्लन रहेको आरोपीहरु र थप बाहिरी व्यक्ति यस घटनामा संग्लनता देखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका डिएसपी बेल बहादुर पाण्डेले बताए । संग्लनता देखिएपनि प्रमाण अपुग रहेको कारण घटना अनुसन्धानमै रहेको उनले बताए । copy form onlinekhabar
हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङमा पनि स्वबियू चुनावको रौनक
प्रधानमन्त्री अेालीले चीनबाट पूरा गर्ने भए सारा नेपालीकाे सपना, हेर्नुहाेस् के के भए सम्झौता….
एमाले अध्यक्ष तथा पुर्व प्रधानमन्त्रीको घरमा बम बिष्फोट
हात्तीवन वार्ताः जेठ १ भित्र स्थानीय चुनाव गर्ने ‘समझदारी’
कहाँ छन् विप्लप ? खोज्न देशभर प्रहरी परिचालन
अपडेट : कुस्मा नगरपालिकामा काँग्रेस अगाडी, काँग्रेस गढमा एमालेका वडा अध्यक्षको अग्रता
उपचार गर्न नसक्दा घरमै थलिए परियार
कमल थापालाई जिल्लायो निर्वाचन आयोगले, हिन्दुराष्ट्रको एजेण्डा आयोगद्वारा खारेज
एमाले अध्यक्ष ओलीले भने– ‘म ढलेँ भने चिन्ता नलिनू, जुरुक्क उठ्ने छु’